China Fuel Tanker API Camlock njikọ Adafta ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Jiasheng
Mmanụ ụgbọ mmiri API Camlock njikọ nkwụnye
Ihe nkwụnye ihe nkedo API Ezubere nke ọma maka valvụ API na njikọ,
Charhapụ ịrụ ọrụ nke ọma.The oblique n'akuku imewe bụ adaba maka ike ndọda n'ije iji mee ka ebutu ukwuu Cleaner na ngwa ngwa, ọ nwere ike na-echebe adụ tube bụghị kpudo mgbe ebutu.
Di na nwunye na valvụ drain mmanụ na-agbaso ụkpụrụ nke API Rp 1004. Ọ nwere ike ijikọ na di na nwunye API. Na elu ọxịdashọn ọgwụgwọ na igwe anaghị agba nchara, elu corrosion eguzogide, sturdy na inogide.
Aha ngwaahịa High Quality igwe anaghị agba nchara API nkwụnye
Ihe onwunwe ahụ Igwe anaghị agba nchara
Elu na-acha 4 ″ - 2.5 ″ / 4 ″ -3 ″ / 4 ″ -4 ″
Àmụmà: -150 ° F ka + 250 Celsius F
Ọkara: peturuolu, manu oku, mmanụ dizel, mmiri, wdg
API Ike ndọda
Ihe nkwụnye ihe ntinye API bụ ihe kachasị mma maka nkwụnye ala ala API iji hụ na nchekwa na ngwa ngwa na ibudata. Ejiri ya 'egbugbere ọnụ' mee nke a nke na-eme ka njikọ dị mfe. Ndị di na nwunye nwere ọkọlọtọ 4 ″ API RP-1004 nkwụnye ụgbọ ala.
A ga-etinye gị ka ị mee mgbake ahụ. Enwere nha atọ (2.5 ″ 3 ″ 4 ″) iji mejuo nhọrọ dị iche iche. ihe nkwụnye ọkụ ọkụ.
Di na nwunye Camlock na - eme ka arụ ọrụ ha ka mma mgbe ha na-ebutu mmanụ ụgbọ mmiri. Uniquedị pụrụ iche dị mma maka ịchụpụ iji mee ka ibudata ngwa ngwa karịa na ngwa ngwa. Ọma chebe sooks na-agaghị ehulata. Nwanyi-Di na Nwunye na-agbaso ihe achọrọ API RP1004, nwere ike jikọọ ya na ọkọlọtọ API Coupler.
1.Ndị di iche iche di iche iche
Ihe ndọda ike ndọda na-eme ka arụmọrụ dị mma mgbe ị na-arụ ọrụ ibutu. Ọdịdị nke akụrụngwa dị adaba maka ike ndọda iji mee ka nbudata na-adịwanye ọcha na ngwa ngwa. Nwanyi-Di na Nwunye na-agbaso ihe achọrọ API RP1004, nwere ike jikọọ ya na ọkọlọtọ API Coupler.
2. Uru na atụmatụ
* Ọgwụgwọ siri ike: A na-agafefe valvụ ahụ dum na-eme ka usoro mgbatị pụrụ iche iji melite ndụ ọrụ ya.
* Ezi uche Design: The oblique n'akuku imewe adaba maka ike ndọda agbapụta na rụọ ọrụ nke ọma chebe discharging hoses.
* Ejiri Nhazi: A na-emepụta akụkụ dị iche iche dịka ọkọlọtọ API RP1004, na-ejikọ njikọta ọkọlọtọ API.
* Light Ibu: The isi ahu ka nke aluminum alloy, ọ bụ ihe ìhè na sturdy.
* Aluminium alloy anwụ-nkedo Ọdịdị, anodized ọgwụgwọ.
* Cam kpochidoro ọrụ, arụnyere site pịa.
* 22.5 n'akuku ala belata mmanụ njigide.
* Nanị e mere njikwa kwupụta kpochidoro anya na-eme ka njikọ dị mfe ma nwee akara a pụrụ ịdabere na ya.
* Cam na free-sere n'elu mmiri na-ewepụ esemokwu na ekwe, mfe jikọọ na-enweghị griiz.
* Ọ dị mfe ịlele usoro ahụ site na iko anya lamellar.
* Ejiri ya maka ọtụtụ ngalaba tankers, iche iche na nbudata maka mmanụ dị iche iche.
* Na-ezute ọkọlọtọ API1004.
Ihe onwunwe ahụ aluminom
Ratingzọ Ọrụ Ngwaọrụ
Nka na ụzụ: Nkedo
Nkọwapụta 4 × 2.5 sentimita asatọ, 4 × 3 sentimita asatọ, 4 × 4 sentimita asatọ
Àmụmà: -20 ~ + 70 ℃
Ọkara: Mmanụ, Kerosene, Diesel
Ihe ndọda ike ndọda
ihe kachasị mma maka nkwụnye ala ala API iji hụ na nchekwa na ngwa ngwa na ibudata. Ejiri 'egbugbere ọnụ' nke ime ya mee ya ka ọ dị mfe. Ndị di na nwunye nwere ọkọlọtọ 4 ″ API BR-1004 nkwụnye ọkụ.
Aka: Ọla kọpa
Pin: Igwe anaghị ata nchara
1. Aluminium alloy anwụ-nkedo Ọdịdị, anodized ọgwụgwọ.
2. Cam kpochidoro ọrụ, arụnyere site pịa.
3. akụkụ 22.5 gbadaa ala belata njigide mmanụ.
4. Nanị imewe njikwa kwupụta kpochidoro anya na-eme ka njikọ dị mfe ma nwee akara a pụrụ ịdabere na ya.
5. cam na free-sere n'elu mmiri na-ewepu esemokwu na ekwe, mfe jikọọ na-enweghị griiz.
6. Ọ dị mfe ịlele usoro ahụ site na iko anya lamellar.
7. Ejiri maka ọtụtụ ngalaba tankers, iche iche loading na ebutu maka mmanụ dị iche iche.
8. Na-ezute ọkọlọtọ API1004.
Nha: 4 * 4, 4 * 3, 4 * 2.5
Metzọ Ọrụ: Ngwaọrụ
Ịrụ ọrụ Pressure: 0.6MPa
Okpomọkụ nso: -20 ~ + 70 ℃
Nke gara aga: Coupler Iweghachite Anụ
Osote: Frence API nkwụnye valvụ
Ihe nkwụnye njikọ API Camlock